Ma ka dhici karaa Iswiidhen shil tareen oo la mid ah kii Spain? - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waa ka dib shilka tareenka Santiago de Compostela. Foto: AP Photo/Lalo Villar/Scanpix
Ma ka dhici karaa Iswiidhen shil tareen oo la mid ah kii Spain?
La daabacay fredag 26 juli 2013 kl 10.28
Maalintii arbacada waxaa dalka Spain ka dhacay shilkii ugu xumaa xagga tareenada ee dalkaasi soo mara muddo afartan sano ah, waxaana shilkaasi ku geeriyooday dad gaaraya sideetan qof ka dib markii tareen xawaare badan ku ordayay uu ka booday birta xadiidka ee tareenada ku socdaan meel dibeda ka ah magaalo la yiraahdi Santigo de Compostela.
Weli si dhab looma oga sababta dhalisay shilkaasi hase yeeshee sida laga soo xiganayo xafiiska waddooyinka tareenada Yurub ee ERA wadada xadiidka ee uu ku socday tareenka shilka ku galay dalkaasi Spain ayaa aheyd wado casri ah oo dhowaantan la dhisay lehna hanaanka astaamaha ee qabanaya fariinka tareenka haddi tareenka uu ku socda xawli saa’id ah oo ka badan inta loogu tala galay.
Habka nabad gelyada tareenada ee dalka Spain ayaa ka sarreeya isku cel celis ahaan kuwa ka jira qaaradda Yurub haddaba dalka Iswiidhen ayaa hadda waxaa la is weydiinayaa ma ka dhici karaa shil la mid ah kii arbacaddi ka dhacay dalka Spain.
Anders Svenson, oo ah isu duwe ka tirsan hay’ada gaadiidka ee Trafikverket ayaa sheegay in aan damaanad buuxda laga bixin karin in shil uusan dhaceyn balse waxa uu sheegay in shil la mid ah kan Spain oo ay ku dhintaan tiro dad oo sidaasi u badan in ay tahay wax aan ka dhici karin Iswiidhen waayo buu yiri waddooyinka tareenada dalka waa kuwa casri oo leh hanaan ku xadiya xawaaraha tareenada inta loogu tala galay isaga oo dhinaca kale sheegay in shaqaalaha tareenada dalka in ay iyagu yihiin kuwa si wanaagsan u tababaran.
Lena Kecklund, oo iyana ah qof ka tala bixiya arrimaha nabad gelyada ayaa sheegtay in haddii sida ay tahay loo raaco hanaanka nabad gelyo ee waddooyinka tareenada dalka in ay yar tahay fursada ah in shil la mid ah kan Spain oo kale in uu ka dhaco Iswiidhen.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah dadka ku safra tareenada oo la hadlay idaacadda P1 ayaa sheegay in aysan ku jirin cabsi ah in uu shil dhaco iyada oo mid ka mid ah dadkaasi uu sheegay in gaadiidyada la isticmaalo oo dhan in uusan ku jirin mid la oran karo shil kuma dhacayo.
Shilka Spain ayaa ahaa kii labaad ee dhowaanahan ka dhaca qaaradda Yurub iyada oo ka horreeyay shil taren oo isna ka dhacay dalka Faransiiska.
Ma ku kalsoon tahay habka nabad gelyada tareenada dalka Iswiidhen?